रचनात्मकता - आधारित छ जो मनोवैज्ञानिक धेरै वर्ष को लागि बुझ्न खोज्नु एक रहस्यमय प्रक्रिया छ।
Psychoanalysis, Sigmund मनोविश्लेषण देखि, को अवधारणा मार्फत रचनात्मक अभिव्यक्ति लागि इच्छा व्याख्या गर्ने प्रयास यौन ऊर्जा। Behaviorists यसलाई कुनै व्यवहार को एक स्थिर तरिका भन्दा बढी लाग्यो। र अस्तित्व मनोवैज्ञानिक हाम्रो अस्तित्व को सामान्य स्कोप परे बाहिर निस्कन प्रयास रूपमा रचनात्मक प्रक्रिया जांच।
सामान्य मा, रचनात्मकता को मनोविज्ञान अब प्रतिभा फेला पार्न र प्राप्त गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ, यो के कारकों निर्भर गर्दछ।
सबैभन्दा विद्यालय एउटा कुरा मा सहमत छु। रचनात्मक क्षमता वाद्ययन्त्रहरू खेल्न सुन्दर रंग र राम्रो मात्र क्षमता सीमित छैन। तिनीहरूले अर्थ वास्तविकता को जागरूकता को नयाँ स्तर, अज्ञात को क्षेत्र मा सार्न सक्ने क्षमता, एक सम्पूर्ण नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्न विगतका अनुभव प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता।
यसरी, रचनात्मकता को मनोविज्ञान आफ्नो मनमा यस्तो संक्रमण गर्न सक्षम हुन एक व्यक्ति लागि अवस्थाको सिर्जना यसको मुख्य कार्य देख्नुहुन्छ। र, को पाठ्यक्रम, यी कौशल को विकास बाल्यकाल मा सुरु हुन्छ।
विद्यालय र Kindergartens मा शिक्षा
दुर्भाग्यवश, छोराछोरीको GBOU मा परम्परागत शिक्षा तथ्यलाई आधारित छोराछोरीलाई व्यवहार को मानक ढाँचाहरू मा हालिदिन गर्न। रचनात्मकता को मनोविज्ञान लगभग हुनत अनिवार्य कार्यक्रम, सबै अध्ययन र यस्तो कक्षाहरू समावेश छैन। यसको रचनात्मक क्षमता को खुलासा मा अनुसार सामान्यतया स्वीकार किराना संग बच्चा को शिक्षा, र - स्कूल को मुख्य कार्य।
हाल, लुकेको प्रतिभा र छोराछोरीको क्षमताहरु को विकास गर्ने उद्देश्य जो, अध्यापन मा वैकल्पिक पाठ्यक्रम छन्।
मारिया मोन्टेस्वरी विद्यालय
यो हरेक बच्चा छ कि asserting, धेरै अध्यापन को दिशा मा धेरै द्वारा चिरपरिचित र प्रेम छ रचनात्मक। हामी सिर्फ उसलाई आफूलाई फेला पार्न मद्दत गर्न आवश्यक छ।
मोन्टेस्वरी समुह कक्षा मा बच्चाहरु सामान्य कार्यहरू र निर्णय बाहिर जाने आवश्यक छ आफ्नो समस्या समाधान गर्न जहाँ एक विशेष वातावरण सिर्जना गरियो। फलस्वरूप, तिनीहरूले बक्समा बाहिर लाग्छ न्यायको स्वतन्त्रता हासिल गर्न सिक्न र आफ्नो क्षमताहरु unleash गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, यो विधि यसको कमियां छ। महत्वपूर्ण कुरा यो खातामा केही सीप विकास गर्न मात्र होइन आवश्यकता, तर पनि बच्चाको रचनात्मकता को मनोविज्ञान लिन्छ भन्ने छ।
प्रशिक्षण र शिक्षा विभिन्न विधिहरू संग Kindergartens वा विद्यालय आमाबाबुको आवश्यकता पूरा छैन भने, तिनीहरूले स्वतन्त्र बच्चाहरु संग, आफ्नो व्यक्तित्व र फ्लेयर प्रकट काम गर्न सक्छन्।
बच्चाहरु को विकास को लागि आत्म-अध्ययन
काम अध्ययन, मनोविज्ञान परंपरागत बक्समा बाहिर लाग्छ र कल्पना विकास गर्ने क्षमता मा केंद्रित। क्षणमा, त्यहाँ खेल र व्यायाम समस्या को सुलझाने एक असामान्य दृष्टिकोण विकास गर्ने उद्देश्य प्रशस्त छन्। पनि कान्छो छोराछोरीलाई जारी खिलौने, शैक्षिक कल्पना लागि।
को संभावना अन्वेषण कला मनोविज्ञान रंग को धारणा र आकारहरू, साथै कसरी रेखाचित्र आन्तरिक हस्तक्षेप प्रक्रिया हटाउन प्रश्न, जवाफ। यसलाई तपाईं मात्र कसरी आकर्षित गर्न सिक्न अनुमतिको विद्यालय धेरै सिर्जना, तर पनि मुक्त मानिस बन्ने, आंतरिक परिवर्तन गर्न। त्यसैले, तपाईंले आफ्नो बच्चा आकर्षित र साँच्चै अद्वितीय उत्पादन सिर्जना गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उहाँलाई यी निर्देशनहरू मध्ये प्रशिक्षण सुरु गर्न आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले अन्वेषण रचनात्मकता को मनोविज्ञान मानिसको सम्भावनाहरू सामान्य रूपरेखा र डिजाइन भूमिकाको परे जानुहोस्। यो बाटो यो एक मानिस खुसी र दुखी दुवै गर्न सक्छन्, सजिलो छैन। तर आमाबाबुले बच्चाको असामान्य क्षमता हेर्न भने, तिनीहरूले उहाँलाई तिनीहरूलाई खोल्न मदत गर्न सक्छ। तर, यो पनि घनिष्ठ मान्छे को विचार को बिना जीवन मा बाटो रोज्न भनेर मानिस आफूलाई हुन चेतावनी गर्नुपर्छ।
आतंक आक्रमण: कसरी सामना गर्ने?
के घृणा? घृणा को भावना
म त्यहाँ स्क्विड पोस्ट गर्न सक्छन्? हामी सिक्न!
"रत्न": अर्थ र अभिव्यक्ति एटिमोलजी
सही बाइक चयन
कम क्यालोरी Kebab चिकन आफ्नो वजन हेर्दै छन् जो मान्छे को लागि उपयुक्त छ